Baolina kitra any Eoropa :: Nomontsanin-dry Rayan 3 noho 1 ry Mombris • AoRaha
Baolina kitra any Eoropa Nomontsanin-dry Rayan 3 noho 1 ry Mombris
Fifandonan’ny samy Barea. Resin’ny Estac Troyes misy an-dRaveloson Rayan tamin’ny alalan’ny isa, 3 noho 1, ny Grenoble Foot 38, klioba ilalaovan’i Jérôme Mombris, teo amin’ny andro faha-35 an’ny fifaninanam-pirenena frantsay Diviziona faharoa na ny Ligue 2, tamin’ny sabotsy lasa teo.
Ny Grenoble Foot 38 no nanokatra ny isa tamin’ny alalan’ny baolina matin’i Anthony Belmonte, teo amin’ ny minitra faha-7 nilalaovana. Nosahalain’i Yoann Touzghar, lohalaharan’ny Estac Troyes, mpampiantrano, ny lalao telo minitra taorian’izay. Nampiditra ny baolina faharoa ho azy indray i Yoann, teo amin’ny minitra faha-24. Nitady irika namonoana baolina ry Mombris sy namany saingy tsy nahita ny masona haratondry Rayan mihitsy, nandritra ny fizaràm-potoana faharoa. Dimy ambin’ny folo minitra tsy hifaranan’ny lalao kosa vao nahafy ny baolina fahatelo azy ny Estac, tamin’ny alalan’ny penalty nodakan’i Florian Tardieu.
Efa manana tongotr’ila any amin’ny Diviziona voalohany (Ligue 1) ny Estac Troyes noho io fandresena azony, tamin’ny sabotsy io. Mitana ny laharana voalohany ity epika misy an’i Rayan ity ary manana isa 71, ankehitriny. Fahaefatra kosa ny Grenoble Foot 38 izay manana isa 61.
Baolina kitra – Lesona ara-pitantanana :: Korontanin-dRabekoto Raoul indray ny Barea